के सच्चिक्कै यी तस्वीर नेपालमा लागेको डढेलोका हुन् ? यस्तो छ यर्थाथ — Sanchar Kendra
के सच्चिक्कै यी तस्वीर नेपालमा लागेको डढेलोका हुन् ? यस्तो छ यर्थाथ
काठमाडौँ । केही दिनयता मुलुकभरका जंगलमा डढेलो लागेको र हावा नचलेको कारण राजधानी काठमाडौँसहित देशका बिभिन्न शहरमा तुवाँलो फैलिएको छ । जसले गर्दा राजधानी लगायतका स्थानमा चैत १७ गतेदेखि चार दिनका लागि सरकारले विद्यालयहरु बन्द गराएको छ । वायु प्रदुषणका कारण उडानहरु प्रभावित भएका छन् भने गत चैत १३ गते काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा प्रदुषित शहर बन्यो ।
गत चैत १६ गतेदेखि डढेलोबाट नेपालमा भएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराउन ट्वीटर र फेसबुकमा #PrayforNepal व्यापक रुपमा शेयर गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आगलागीका विभिन्न तस्बिर नेपालको डढेलोको भन्दै शेयर गरेका छन् ।
ट्वीटरमा र फेसबुकमा तस्वीर शेयर गरिएका छन् । तिनमा केही नेपालका डढेलोका तस्वीर छन् भने अधिकांश विदेशमा भएका आगलागीका तस्वीर भएको फेला परेको छ ।
नेपालमा लागेको डढेलोको भनी फैलाइएको यो तस्वीर इण्डोनिसियाको आगलागीको भएको द कन्भर्सेसनले जनाएको छ । उक्त तस्वीर अन्तरा फोटो एजेन्सीका फोटोग्राफर रोनी मुहरमानले खिचेको बताइएको छ । यसरी नेपालमा यस वर्ष मनसुन अगाडि लागेको डढेलोको तस्वीर भन्दै अमेरिका, क्यानडा र इण्डोनेसियामा यसअघि भएका आगलागीका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरी भ्रम फैलाइएको छ ।